LIFE STORY Jehova Gọziri M ma ‘n’Oge Dị Mma ma n’Oge Nsogbu’
GỤỌ NKE Acholi Albanian American Sign Language Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Toba) Bengali Bicol Bislama Brazilian Sign Language Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chuvash Cibemba Cinyanja Colombian Sign Language Croatian Czech Danish Drehu Dutch Efik English Estonian Fijian Finnish French Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Japanese Sign Language Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kikamba Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Krio Latvian Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Mambwe-Lungu Marathi Mauritian Creole Maya Mexican Sign Language Mixe Mongolian Moore Ndebele (Zimbabwe) Nepali Norwegian Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Quichua (Imbabura) Romanian Runyankore Russian Sango Serbian Serbian (Roman) Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tok Pisin Tshiluba Turkish Turkmen Turkmen (Cyrillic) Tuvaluan Tzotzil Ukrainian Urdu Uzbek Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Yoruba Zapotec (Isthmus)
17 Echela na ozugbo e nyekwuru gị ọrụ n’ọgbakọ, na i kwesịrị ịgbanwe otú e si eme ihe n’ọgbakọ. Cheta na ihe kwesịrị ime ka a gbanwee otú e si eme ihe bụ mkpa e nwere n’ọgbakọ ma ọ bụ ntụziaka nzukọ Jehova nyere. Otú ahụ àgwà Ịlaịsha si mee ka obi sie ndị amụma ibe ya ike ma gosi na ọ na-akwanyere Ịlaịja ùgwù, i nwere ike ime ka obi sie ụmụnna ike ma ọ bụrụ na ị na-eme ihe Baịbụl kwuru. Ọ ga-egosi na ị na-akwanyere ndị bụ́ okenye kemgbe ọtụtụ afọ ùgwù. (Gụọ 1 Ndị Kọrịnt 4:17.) Ma, ka ị na-amụtakwu ihe, o doro anya na ị ga-eso mee mgbanwe ụfọdụ ga-enyere ọgbakọ aka iso nzukọ Jehova na-aga ụkwụ na ụkwụ. N’eziokwu, Jehova nwere ike ime ka unu bụ́ ndị a na-azụ rụọ ọrụ karịrị nke ndị na-azụ unu rụrụ otú ahụ o meere Ịlaịsha.—Jọn 14:12.
18. Gịnị mere ịzụ ụmụnna nwoke ji dị ezigbo mkpa taa n’ọgbakọ?